2 Makoronike 29:1-36
29 Hezekiya+ akava mambo aine makore makumi maviri nemashanu, uye akatonga kwemakore makumi maviri nemapfumbamwe ari muJerusarema. Amai vake vainzi Abhija mwanasikana waZekariya.+ 2 Akaramba achiita zvakarurama pamberi paJehovha,+ maererano nezvose zvakanga zvaitwa natateguru vake Dhavhidhi.+ 3 Mugore raakatanga kutonga, mumwedzi wokutanga, akavhura masuo eimba yaJehovha, akatanga kuagadzira.+ 4 Akabva aunza vapristi nevaRevhi, akavaunganidza panzvimbo yakanga isina chinhu+ nechokumabvazuva. 5 Akati kwavari: “Nditeererei, imi vaRevhi. Zvino zvitsvenesei,+ mutsvenese imba yaJehovha Mwari wemadzitateguru enyu, mubvise chinhu chisina kuchena munzvimbo tsvene.+ 6 Nokuti madzibaba edu akava asina kutendeka,+ vakaita zvakaipa pamberi paJehovha Mwari wedu,+ zvokuti vakamusiya,+ vakaita kuti zviso zvavo zvifuratire tebhenekeri yaJehovha,+ vakarinza makotsi. 7 Vakavharawo masuo+ evharanda, vakarega marambi akadzimwa,+ havana kupisa rusenzi,+ uye havana kupa zvibayiro zvinopiswa munzvimbo tsvene kuna Mwari waIsraeri.+ 8 Saka Jehovha akatsamwira+ Judha neJerusarema, zvokuti akavaita chinhu chinobvundisa,+ chinhu chinokatyamadza,+ uye chinoridzirwa muridzo,+ sezvamuri kuona nemaziso enyu. 9 Tarirai, madzitateguru edu akaurayiwa nebakatwa,+ uye vanakomana vedu nevanasikana vedu nemadzimai edu vakanga vakatapwa nokuda kweizvi.+ 10 Zvino ndine chido mumwoyo mangu chokuti ndiite sungano+ naJehovha Mwari waIsraeri, kuti kutsamwa kwake kukuru kubve patiri. 11 Zvino vanakomana vangu, musazorora,+ nokuti ndimi makasarudzwa naJehovha kuti mumire pamberi pake kuti mumushumire+ uye kuti murambe muri vashumiri vake+ nevanhu vanokwidza utsi hwezvibayiro.”+ 12 VaRevhi+ vakabva vasimuka, Mahati mwanakomana waAmasai naJoeri mwanakomana waAzariya wokuvanakomana vevaKohati;+ kuvanakomana vaMerari,+ Kishi mwanakomana waAbdhi naAzariya mwanakomana waJeharereri; kuvaGeshoni,+ Joa mwanakomana waZima naEdheni mwanakomana waJoa; 13 kuvanakomana vaErizafani,+ Shimri naJeueri; kuvanakomana vaAsafi,+ Zekariya naMataniya; 14 kuvanakomana vaHemani,+ Jehieri naShimei; kuvanakomana vaJedhutuni,+ Shemaya naUzieri. 15 Vakabva vaunganidza hama dzavo, vakazvitsvenesa,+ vakauya kuti vazochenesa+ imba yaJehovha, sezvakarayirwa namambo maererano nemashoko+ aJehovha. 16 Zvino vapristi vakapinda mumba maJehovha kuti vachenese, vakabudisa zvinhu zvose zvakanga zvisina kuchena zvavakawana mutemberi yaJehovha, vakazviisa muchivanze+ cheimba yaJehovha. VaRevhiwo vakazvigamuchira kuti vazvibudise vaende nazvo kumupata une rukova weKidroni+ waiva kunze. 17 Nokudaro vakatanga kutsvenesa pazuva rokutanga romwedzi wokutanga, uye pazuva rechisere romwedzi wacho vakasvika pavharanda+ raJehovha; zvokuti vakatsvenesa imba yaJehovha mumazuva masere, vakapedza pazuva rechigumi nematanhatu romwedzi wokutanga.+ 18 Pashure paizvozvo vakapinda mukati maiva namambo Hezekiya, vakati: “Tachenesa imba yose yaJehovha, atari+ yezvinopiwa zvinopiswa nemidziyo yayo yose,+ netafura+ yezvingwa zvinoturikidzaniswa nemidziyo yayo yose.+ 19 Midziyo+ yose yakabviswa naMambo Ahazi+ kuti irege kushandiswa paaitonga nokusatendeka+ kwake taigadzira, tikaitsvenesa;+ uye iri pamberi peatari yaJehovha.” 20 Zvino mambo Hezekiya+ akafumomuka,+ akaunganidza machinda+ eguta, vakaenda kuimba yaJehovha. 21 Vakaenda nenzombe nomwe+ nemakondohwe manomwe nemakwayana makono manomwe nenhongo nomwe kuti zvive chinopiwa chechivi+ nokuda kwoumambo uye nokuda kwenzvimbo tsvene uye nokuda kwaJudha. Naizvozvo akaudza vapristi,+ ivo vanakomana vaAroni kuti vazvipisire paatari yaJehovha. 22 Naizvozvo vakauraya+ mombe, vapristi vakagamuchira ropa+ racho, vakarisasa+ pamusoro peatari; vachibva vazouraya makondohwe,+ vakasasa ropa racho+ pamusoro peatari, vakauraya makwayana makono, vakasasa ropa racho pamusoro peatari. 23 Vakazoswededza pedyo nhongo+ dzechinopiwa chechivi pamberi pamambo neungano, vakaisa maoko avo pamusoro padzo.+ 24 Zvino vapristi vakadziuraya, vakapisira chinopiwa chechivi neropa radzo paatari, kuti vayananisire vaIsraeri vose;+ nokuti mambo akanga ati chinopiwa chinopiswa nechinopiwa chechivi zvaifanira kuva+ zvevaIsraeri vose.+ 25 Munguva iyi, akaita kuti vaRevhi+ vamire paimba yaJehovha, vaine makwakwakwa esimbi,+ nezviridzwa zvine tambo+ noudimbwa,+ maererano nomurayiro waDhavhidhi+ nowaGadhi+ muoni wamambo newomuprofita Natani,+ nokuti Jehovha aipa murayiro achishandisa vaprofita vake.+ 26 Naizvozvo vaRevhi vakaramba vakamira vaine zviridzwa+ zvaDhavhidhi, uyewo vapristi vaine mabhosvo.+ 27 Hezekiya akabva arayira kuti vapisire chibayiro chinopiswa paatari; uye panguva yakatanga kupiwa chibayiro chinopiswa, rwiyo+ rwaJehovha rwakatanga pamwe chete nemabhosvo, zvichitungamirirwa nezviridzwa zvaDhavhidhi mambo waIsraeri. 28 Ungano yose yakakotama+ paiimbwa rwiyo+ uye pairidzwa mabhosvo—zvose izvi zvakaitika kusvikira chibayiro chinopiswa chapera. 29 Pavakangopedza kuchipa, mambo nevanhu vose vakanga varipo vakakotama, vakagwadama.+ 30 Zvino mambo Hezekiya nemachinda+ vakaudza vaRevhi kuti varumbidze Jehovha nemashoko aDhavhidhi+ neomuoni Asafi.+ Naizvozvo vakatanga kurumbidza vachifara,+ uye vakaramba vachikotama, vachigwadama.+ 31 Hezekiya akazopindura, akati: “Zvino mawana+ simba kuti muite basa raJehovha. Swederai, muunze zvibayiro+ nezvibayiro zvokuonga+ kuimba yaJehovha.” Nokudaro ungano yakatanga kuunza zvibayiro nezvibayiro zvokuonga, uye mumwe nomumwe aiva nomwoyo unoda akauyawo nezvibayiro zvinopiswa.+ 32 Kuwanda kwezvibayiro zvinopiswa zvakaunzwa neungano yacho kwakasvika mombe makumi manomwe, makondohwe zana, makwayana makono mazana maviri—zvose izvi kuti zvive chinopiwa chinopisirwa Jehovha;+ 33 nezvinopiwa zvitsvene, mombe mazana matanhatu nemakwai zviuru zvitatu. 34 Vapristi+ ndivo vakangoita vashoma kwazvo, havana kukwanisa kuvhiya zvinopiwa zvinopiswa zvose.+ Naizvozvo hama dzavo+ vaRevhi dzakavabatsira kusvikira basa rapera,+ kusvikira vapristi vazvitsvenesa,+ nokuti vaRevhi vaiva nemwoyo yakarurama+ pakuzvitsvenesa kupfuura vapristi. 35 Uyewo, zvinopiwa zvinopiswa+ zvakanga zvakawanda kwazvo pamwe chete nemafuta+ ezvibayiro zvokugoverana+ uye pamwe chete nezvinopiwa zvinonwiwa+ zvezvinopiwa zvinopiswa. Nokudaro basa reimba yaJehovha rakagadzirirwa.+ 36 Naizvozvo Hezekiya nevanhu vose vakafarira kuti Mwari wechokwadi akanga agadzirira vanhu,+ nokuti chinhu chacho chakanga changoerekana chaitika.+